Labada sababood ee ka danbaysa Qaraxyada maxay yihiin? - Ahmed Abdihadi
Markaad si u fiiriso waxaa soo fiicnaanaya damqashada iyo dareen wadareedka bulshada. sidaas darteed, waxaan saadaalinayaa in 10ka sano ee soo socda uusan sii socon Karin isqarxiska iyo dilka macna darrada ah ee lagu hayo bulshada Soomaaliyeed maxaa yeelay waxaan iman doonta maalin aan la aqabli doonin isqarxiska.
Dhinaca kale, marka laga tago dareenka iyo danqashada ay dadku muujinayaa haddana ma arag dad su’aalo ka keenay sababta ka danbaysa qaraxyada.Markastana sababta ayaa ka muhiimsan ficilka maxaa yeelay haddii aan sababta la xallin waxaa iska cad in ficilku soo laabanayo marar kale.
Haddaba, anigu waxaan ku soo koobi sababta qaraxyada iyo dilka nidaamsan ee ay Alshabab wadaan labo arrin:
1. Xagjirnimo iyo fasirka diinta oo la khalday. Diimaha dhan waxaa ku jira kooxo xagjir ah oo fasir ciriiri ah saara macna diinta. Taaso marka danbi ku riixda in ay dhiig badan daadiyaan si ay u gaaraan ujeeddooyinka ka dhasha fasirkooda. Nasiib wanaag, meelaha dowladuhu ka jiraan marka hore ayaaba lagu hortagaa in ay awood yeeshaan.
2. Ha’aydihii dowladda ee la dagaalami lahaa oo aan si fiicn u dhisnayn. Si fiican u dhisnayn waxaa ka wadaa dadkii ku habboonaana lagama shaqalaysiinin, dhaqaalihii iyo akhlaaqiyaadkii lagu wadi lahaana ma dhismin.La dagaalku kali ah ma ah in laga hortago gaari ama qof isqarxinaya ee waxaa kamid ah in laga hortago ilaha xagjirnimada halka ay ka imanayaan.
Arrintan waxaa siyaasado fiican ka samayn karta wasaaradda Awqaafta iyo arrimaha diinta . waa in wasaaradda Awqaaftu nidaamisaa masaajidda, culumada diinta fasirta, macaahidda sharciga ah iyo manaahijta lagu dhigo.
Soomaalidu, asal ahaan ma qaadanin tafsiir xagjir ah oo dhinaca diinta ah ka hor xarkaadkii islaamiga ah ee ay dowladdu Sucuudigu maalgalinta ku billowday toddobaatanaadkii qarnigii tagay. Si gaar ah kooxihii qaatay fikirka wahaabiga ah.Ogaada fikirkan wuxuu ahaa fikir balaayiin doolar ay ku maalgalisay dowladdu Sucuudigu si uu faafo.
Hadda, dowladda Sucuudigu way iska dhaaftay maalgalinta fikirkan oo waxay ku beddeshay kuwa aaminsan in aan boqorka ama qofka xilka haya hub loo qaadan Karin. Kooxdan cusub waxaa loo yaqaanaa “ Salaf Jadiid”.
Waxaan ku soo koobi xalka ay tahay in aan abbaarno si aan meesha uga saarno cabsida iyo dilka dusha naga saaran 24 saac wuxuu yahay in aan helno dowlad hay’ado ku dhisan oo siyaasado karti ku dhisan wadata si xagjirnimada meesha looga saaro.Ahmed Abdihadi,